အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: မြေအောက်ကြယ်နှင့် တွင်းပြာကြီး
31 Responses to “မြေအောက်ကြယ်နှင့် တွင်းပြာကြီး”
မချောရေ..ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ လာလေ့လာသွားပါတယ်... ဟဲ..မတွေ့တာကြာပြီ..နေကောင်းလား...
ထူးဆန်းတဲ့ နေရာတွေပါပဲ၊ ရှာဖွေတင်ပြတာ ကျေးဇူးပါပဲ၊
ပိုးကောင်လေးတွေက avatar ကားထဲက ပိုးကောင်လေးတွေ လိုနေမှာပဲနော်.. ဟီးဟီး.. မိုက်တယ်..
တွင်းအနက်ကြီးထဲကိုတော့ ရေငုတ်ပြီး ဆင်းချင်သေးတယ်.. ဘာကောင်တွေရှိမလဲမသိဘူး...
အမရေ လည်လည်လာပါတယ် ပင်လယ်ကိုတော့ကြိုက်တယ် ဒါပေမယ့် ရေကအနက်ကြီး ကျောချမ်းတယ် အဟင်း.. ရေထဲဆင်းရင်တစ်ကိုယ်လုံးချမ်းမယ်ထင်တယ်နော်
သဘာဝတရားကြီးကလဲ ဆန်းကျယ်သားနော် ....
တွင်းနက်ကြီးက အပေါ်ကရိုက်ထားတဲ့ပုံ တော်တော်ကို လှတယ် ရောက်ဖူးချင်တာ ။ သဘာဝ အလှတရားတွေက ထူးခြားဆန်းကြယ်ပါ့ ။
လောလောဆည်တော့ အပြေးအလွှားလေး ပုံတွေကြည့်သွားတယ်။
ကြယ်တွေတော့ ကြည့်ချင်တယ် တွင်းနက်ကြီးတော့ မသွားရဲဘူး။
ကြယ်လေးတွေကိုတော့ သွားကြည့်ချင်သား.. တွင်းပြာပြာ အနက်ကြီးကိုတော့ မကြည့်ရဲပေါင်..
အပြာရောင် ဆိုလျှင် ဘယ်လိုမဆိုကြိုက်သည်
ချော ကိုယ့်ကိုခေါ်နော် သွားရင် ကိုယ်လဲ လိုက်မယ်နော် (ဒီတခါ တမျိုးပြောင်းမန့်ကြည့်တယ်)
အလင်းရောင်တွေ လင်းဖြာနေတဲ့ ကြယ်လိုလို ကောင်လေးတွေကိုတော့
ပင်လယ် ကြီးထဲလည်း ရောက်တော့ရောက်ဖူးချင်သား။
တွေးကြည့်တာနဲ့ တင်တောင် အသဲတွေ ယားလို့ ။
ကြောက်စရာ ကြီး။ လေ့လာခွင့် ကြုံခဲ့ရင်တော့
ရေဆင်းငုပ် လိုက်မယ်။ :)
ကောင်းမှ ကောင်း။ :)
Very Good bec we got some knowledge from ur posts. Thanks.
သွားဖို့ လဲ မလွယ်၊ ရောက်လဲမရောက်နိုင်တဲ့နေရာလေးကို
ရှာရှာဖွေဖွေ တင်ပြပေးလို့ကျေးဇူးပဲ ဗျာ။
ကြယ်လေးတွေ (ပိုးကောင်လေးတွေ)ကို လေ့လာချင်တာ။ သူတို့ က ပိုးစုန်းကြူးလေးတွေနဲ့မျိုးတူသလားဟင်..
အမချော....ကျနော်သွားမလို့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော် လိုက်ခဲ့ပါလား :)
ဗဟုသုတရသွားပါတယ် အမချောရေ..... ရှဲ့ရှဲ့ :)
တွင်းနက်ကြီးကို ဓာတ်ပုံထဲကနေကြည့်ယုံနဲ့တင် ကျောချမ်းစရာ...
ကြည့်ပြီး မြင်ဖူးချင်တယ် ဒါပေမဲ့ မသွားရဲဘူး
မြန်မာပြည်က ပိုးစုန်းကြူးလို့ အကောင်လေးတွေထင်တယ်နော် အလင်းရောင်ထွက်နေတယ် မြင်ချင်တယ် တွင်းနက်ကြီးထဲတော့ သွားရဲဘူး
အထူးအဆန်းတွေပဲနော်။ အဲလိုမျိုးပိုးကောင်လေး ၃၊ ၄ ကောင်လောက် လိုချင်တယ်။ အပြာရောင်တွင်းကြိးကလည်း အသည်းအေးစရာကြီး။ ငုံကြည့်တော့ ကျောချမ်းသွားတယ်။
အထူးဆန်းတွေ လာကြည့်သွားပါတယ်။ နောက်ထပ်ရှိသေးရင် လည်းတင်ပေးပါအုံးနော်........
အဲလို အကောင်တွေ မီးပျက်ချိန် အိမ်မှာ ရှိစေချင်တယ်....:P
ကြယ်လေးတွေ အတော်လှတယ်နော်းဝ
တွင်းနက်ကြီးတော့ ကြောက်တယ်း))
ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကို မြန်မာစာလုံးတွေနဲ့တွေ့ရတာ အရမ်းဝမ်းသာတယ်။
ဓါတ်ပုံပဲ သေချာကြည့်သွားတော့တယ်မမရေ....သွားရဲဘူး ကြောက်ရို့....ဟီးးးးဟီးးးးးး
Ron Tedwater said...